Olee otu esi akwadebe saịtị maka njikarịcha search engine?
Chee echiche banyere ọnọdụ ahụ ị sụgharịrị nrọ gị n'eziokwu wee malite na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ugbu a, ọ bụ oge iji melite ọnụnọ gị n'ịntanetị ma dọta ndị ahịa gị nwere ike ịbanye na ngalaba ọhụrụ gị. N'ezie, enweghi ike ime nkwalite weebụ gị n'otu ụbọchị ka ọ na-ewe oge maka ndị na-achọ crawlers iji depụta mpaghara gị. Otú ọ dị, ịnwere ike imetụta usoro a n'iji njikarịcha search engine. Dị ka SEO bụ usoro na-ewe oge, ị gaghị enweta nsogbu ozugbo. Ka o sina dị, mmelite mbụ kachasị mma ị na-eme mgbe ntanetịime weebụ gị nwere ike inwe mmetụta dị ịrịba ama na ike ịntanetị gị. Dịka ọmụmaatụ, nhọrọ nchịkọta nhọrọ ziri ezi nwere mmetụta dị ukwuu n'ọdịdị ntanetị n'ọdịnihu ka ndị ahịa gị nwere ike ịchọta saịtị gị site na ọchụchọ ndị a. Ịkwesịrị ịmepụta mgbasa ozi kachasị mma n'otu oge iji chekwaa oge n'ọdịnihu ma belata mkpa iji dozie njehie weebụ ọ bụla.
Na ntuziaka a, ị ga-enwe ụfọdụ ndụmọdụ maka ndị nwe saịtị ahụ bụ ndị na-emepụta ebe nrụọrụ weebụ ha. Atụmatụ ndị a ga-enyere gị aka ịmepụta ezigbo njikwa atụmatụ engine engine mgbe ọ bụla ị malitere ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ ọhụụ iji hụ na e mere ya site na mmalite iji dọta mma okporo ụzọ site na engines ọchụchọ.
Olee otu m ga - esi SEO ụlọ ọrụ mkpokọta m na nso nso a?
Ikwesiri ịhazi ebe nrụọrụ weebụ gị maka okwu dị mkpa iji meziwanye ọnọdụ ya. Ibe akwukwo nke ohia gi kwesiri idetu ihe ndi ozo nke di mkpa, nke di elu iji nyere aka nyocha achoputa ihe omuma gi. Ịkwesịrị ịmebie usoro ihe odide gị dị iche iche. A ga-eji ụdị ọ bụla mee ihe na nchọta ọchụchọ dị iche iche iji bulie ohere ị ga-esi banye na Google TOP site na ajụjụ dịgasị iche. Nchịkọta saịtị nwere ọtụtụ uru. Nke mbụ, ọ na-emepụta isiokwu doro anya na ịchọta okwu ọchụchọ maka ibe weebụ ọ bụla, kama ịnwe isi peeji nke lekwasịrị ọtụtụ mkpụrụ okwu. Ụdị iche iche a na-enye ohere kachasị na weebụsaịtị.
Onye enyi na enyi kachasị mma ọdịnaya
Ugbu a, ihe dị mkpa na ọdịnaya ọdịnaya dịka ọkwa dị mkpa Google ranking. Ọdịdị nchịkwa kachasị mma bụ akụkụ nke njikarịcha na saịtị. Ọ pụtara na ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ nwere ike ịchịkwa akụkụ a nke SEO. Ya mere, tupu ịmalite mgbalị SEO ọ bụla dị irè, jide n'aka na ọdịnaya gị dị mma nke ọma ma dị mkpa maka ụlọ ọrụ gị na itinye aka na ya. Ọzọkwa, ịkwesịrị itinye mkpụrụokwu dị mkpa n'ime ọdịnaya gị iji mee ka ọ pụta ìhè ịchọ ọchụchọ. M na-adụ gị ọdụ ka ị tinye ọkwa kachasị elu na ịzụ ahịa-na-enweta isiokwu dị na utu aha na ná mmalite nke paragraf ahụ. Ọzọkwa, ị nwere ike iji ha na nkọwa na ALTs.
Dịka nchọpụta a na-adịbeghị anya, Google na-ebuli elu peeji ndị ahụ nwere ihe karịrị 2,000+ okwu mgbe ahụ na peeji nke nwere mkpirikpi na ìhè dịka ha anaghị eburu ihe ọ bụla bara uru maka ndị ọrụ 'ozi. Ọ bụ ya mere m ji enye ndụmọdụ iji dee ederede 2-3 maka ogologo isiokwu na nhazi nlezianya, dịka ọmụmaatụ, ntụziaka site na nkwụsị, nkuzi ma ọ bụ ndụmọdụ. Nnyocha a na-egosikwa, na ogologo oge na ọkara na-enwe ike inwe njikọ karịa ederede dị mkpirikpi. N'ikpeazụ, ọ ga-enyere gị aka ịmepụta ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke njikọ na-abanye na ibe ọ bụla Source .